Mety Ho Ratsy Nohon’ny Fitondrana Amin’ny Tany Misy Hotakotaka Ny Toko faha-44 Ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Mety Ho Ratsy Nohon'ny Fitondrana Amin'ny Tany Misy Hotakotaka Ny Toko faha-44 Ao Thailandy
Voadika ny 02 Jona 2015 17:03 GMT
Herintaona izay no lasa hatramin'ny nanambaran'ny miaramila ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka tao Thailandy. Nofoanana ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka tamin'ny volana lasa teo, nefa nisy lalàna vaovao manome fahefana ‘tsy misy fetra’ ho an'ny miaramila hitondra ny firenena.
Avy amin”ny Prachatai, tranonkala tsy miankina manome vaovao ao Thailandy, ity lahatsoratra ity, ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices ho toy ny ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty.
Ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka, izay nampiharina nanomboka ny volana May 2014, dia nofoanana ihany ny 20 martsa 2015 tao Thailandy. Saingy, nosoloin’ny Fitondràna Miaramila Thai fitsipika vaovao nataony ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka raha tokony homena ny sivily ny fitondrana an‘i Thailandy araky ny nampanentenainy, ny Toko faha 44-n'ny lalànan'ny fisoloan-toerana, izay mampitombo bebe kokoa ny fahefany sady mbola hitazonany ny fahafahana hanapotika ny fihokoana ara-politika amin’ny alalan’ny fisamborana sy ny fanagadrana.
Manome ny Jeneraly Prayut Chan-o-cha, lehiben’ny fitondrana miaramila sy ny Praiministra, fahefana tsy misy fetra ary tsy misy fiarovana ny zon’olombelona ny fampiharana ny Toko faha 44-n’ny lalànan'ny fisoloan-toerana, araky ny filazan’i Brad Adams, Talen’ny Fanarahamaso ny Zon’Olombelana any Azia :
Manamarika ny firosoan’i Thailandy lalina bebe kokoa any amin’ny didy jadona ny fampiharan’ny Jeneraly Prayut ny Toko faha 44-n'ny Lalampanorenana. Tsy tokony ho voafitak’io fanodinkodinana miharihary ataon’ny lehiben’ny fitondrana miaramila io ny naman’i Thailandy any ivelany, amin’ny fanoloana ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka ka ny andininy ao amin'ny lalampanorenana no tena manome azy fahefana tsy misy fetra sy tsy hay refesina.
Zava-misy 15 mikasika ny fahefana midadasika azon’ny fitondrana miaramila tamin’ny fanerena ny fampiharana ny Toko faha 44 ireto manaraka ireto.
1. Mbola iharan’ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka ny faritra nampiharana ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka talohan’ny fanonganam-panjakana tamin’ny volana may 2014, izay mandrakotra distrika 4 ao amin’ny faritany atsimo ao Songkhla sy faritany telo izay sarotra fehezina any amin’ny farany atsimo, Yala, Pattani, ary Narathiwat.
2. Mbola iharan’ny fitsarana ataon‘ny miaramila ihany ny sivily amin’ny tranga mikasika ny fiarovam-pirenena, toy ny fananana na fitondrana fitaovam-piadiana tsy nahazoana alalana na tsy ara-dalàna eny imasom-bahoaka, ny mamporisika fihokoana, ary ireo izay manimbazimba araky ny Toko faha 112-n’ny lalàna mifehy ny Heloka bevava, fantatra amin’ny anarana hoe lalànan’ny faniratsiràna mpanjaka, araky ny voalazan’ny Filankevi-Pirenena ho an’ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana nataon'ny fitondrana miaramila (NCPO), Filazana laharana 37/2014, 38/2014, ary 50/2014.
3. Afaka mampiakatra fitsarana ambony ny mpiaro, amin’ny didim-pitsarana navoakan’ny fitsarana miaramila. Saingy, tsy azo ampiakarina fitsarana ambony, araky ny Toko faha 61 ao amin’ny Lalànan’ny Fitsarana Miaramila tamin’ny taona 1955, ny tranga teo ambany fiadidian’ny fitsarana miaramila izay niseho teo anelanelan’ny 25 may 2014 sy 31 martsa 2015.
4. Araky ny Toko faha 15-n’ny Lalànan'ny Fitondrana amin'ny Tany misy Hotakotaka tamin’ny taona 1914, afaka managadra olona hatramin’ny fito andro ny mpiasa miaramila, aorian’izay tsy maintsy alefa any amin’ny pôlisy ny voampanga mba hatao famotorana. Na izany aza, ny andininy 3/2015-n’ny NCPO Toko faha 44 dia mandidy ny ‘Manamboninahitry ny Fitandroana ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana’ (POM), izay voafaritra ho toy ny mpiasa miaramila manana laharana lietnà-lefitra no miakatra, mba hiasa toy ny manamboninahitry ny fanadihadiana ho an’ireo voampanga amin’ny resaka heloka mifandray amin’ny fiarovam-pirenena.
5. Manome fahefam-pitsarana feno ho an'ny mpiasa miaramila mandritry ny fitazonana am-ponja, ny famotorana, ny fiampangana, ary mitsara any amin’ny fitsarana miaramila, tranga mifandraika amin’ny fiarovam-pirenena ny Toko faha 44 araky ny Fanambarana nataon’ny NCPO-n’ny fitondrana miaramila Laharana 37/2014, 38/2014, ary 50/2014.
6. Afaka mitazona olona hatramin’ny fito andro ny POM any amin’ny toerana izay tsy foto-drafitrasa fanagadrana toy ny kaomisarian’ny pôlisy, ny fonja fanagadrana vonjimaika sy ny toby fanagadrana, ary tsy raisina ho toy ny voampanga amin'ny heloka bevava ireo gadra. Tsy raisina ho toy ny olona nahavita heloka bevava ny voagadra, toy ny fanao tamin'ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka. Noho izany, tsy manana zo hahita ny fianakaviany, ny havany na ny mpiaro azy izy ireo.
7. Rehefa mitazona olona voampanga ho manohitra ny baikon'ny fitondrana miaramila ny manamboninahitry ny fiarovana, ao anatin'ny fito andro, dia afaka 1) mamoaka baiko famerana, 2) mangataka ny handoavana antoka, 3) managadra olona any amin'ny hôpitaly, 4) mandrara ny gadra tsy hanao asa sasany, 5) mandrara ny fandehanana any ampitan-dranomasina, ary 6) mampiato ny fampiasam-bola ataon'ny gadra. Ratsy lavitra nohon'ny tamin'ny Fanambaran'ny NCPO Laharana 40/2014 ireo fepetra ireo.
8. Afaka misambotra, managadra, mikaroka, mangihy, ary manatanteraka hetsika eo ambany fiadidian'ny NCPO ny POM, amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fiarovam-pirenena voalaza ao amin'ny Fanambaran'ny NCPO Laharana 37/2014.
9. Afaka mamoaka baiko ny POM hanakanana ny serasera sy ny fampitam-baovao na avy aiza na avy aiza nihaviany ka mety hitarika ahiahy na manova ny zava-misy na mety hisy fiantraikany ratsy ho an'ny fiarovam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka.
10. Voarara ny famoriana ara-politika ataon'ny olona dimy na mihoatra. Saingy, azo afahana ireo voampanga na misy na tsy misy fepetra, afaka amin'ny andraikitra mikasika ny fiampangana azy ho nanao heloka bevava, raha toa ka mandray anjara antsitrapo amin'ny fiofanana mandritry ny fito andro ampanaovin'ny POM ny olona voampanga ho nanao fihaonana ara-politika. Mifototra amin'ny Toko faha 21 momba ny Lalànan'ny Fiarovana Anatiny (ISA) tamin'ny taona 2008 io fiofanana ataon'ny POM io. Nefa ny tsy hitoviany amin'ny fiofanana voalazan'ny ISA, izay misy dingana fanarahamaso ara-pitsarana kely ihany, lasa miankina fotsiny amin'ny miaramilan'ny POM ny manampahefana mitarika ny fiofanana mandritry ny fito andro lazain'io fepetra io.
11. Tsy voakasiky ny Lalàna momba ny Raharaham-panjakana ao Thailandy ny hetsika ataon'ny manampahefana araky ny Toko faha 44, ary tsy afaka mametraka fitoriana any amin'ny Fitsarana Ady amin'ny Fanjakana ny sivily.
12. Ny lehiben'ny NCPO irery ihany no omen'ny Toko faha 44-n'ny Lalànan'ny Fisoloan-toerana fahefana. Saingy, ny Baiko 3/2015 avy amin'ny NCPO, izay manolo ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka ho Toko faha 44, dia manome ireo fahefana ireo ho an'ny mpiasa miaramila hafa sy ho an'ny manamboninahitry ny NCPO. Mampitombo ny fahefan'ny miaramila manamboninahitra sy ny NCPO izany raha tsorina.
13. Tsy azo raisina ho tomponandraikitra amin'ny hetsika hataony hanakanana ny loza mitatao ho an'ny fiarovam-pirenena ny POM sy ny mpanampy azy izay miasa tsy misy fitongilanana araky ny fahefana nomen'ny fitondrana miaramila azy.
14. Tsy mandrara ny olona izay niharany hitaky onitra amin'ny governemanta ny Toko faha 14-n'ny baiko 3/2015 avy amin'ny NCPO mba hampanekena ny Toko faha 44, araky ny Lalàna mombva ny Andraikitra sy ny Fitondrantenan'ny Mpiasam-Panjakana. Na izany aza, milaza ny Toko faha 44 ao amin'ny Lalànan'ny Fisoloan-toerana fa manaraka ny lalàna sy ny lalampanorenana tanteraka ny baiko na ny hetsika eo ambany fitarihan'ny fitondrana miaramila.
15. Raha fintinina, mbola manome ny fahefana izay azony tamin'ny fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka ho an'ny fitondrana miaramila ny Baiko Laharana 3/2015 avy amin'ny NCPO-n'ny fitondrana miaramila. Na izany aza, manampy fitsipika izy mba hiatrehana ny tsy fitovian-kevitra ara-pôlitika mifototra amin'ny Lalàna mikasika ny Filaminana Anatiny, manafaka ny mpiasam-panjakana amin'ny andraikiny tamin'ny Fitantanana ny Raharaham-Panjakana tamin'ny 2005 tao anatin'ny Lalànan'ny Firenena Latsaka Ankaterena, ary manome fahefana azy hanao famotorana araky ny Lalàna Mifehy ny Heloka Bevava, izay lasa manaraka ny lalàm-panorenana sy manara-dalàna daholo, araky ny Toko faha 44.